ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံပြင် | NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံပြင်
ရိုင်ယန် Salazar, တည်ထောင်သူ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း
တက်-and လာမယ့်မီဒီယာလုပ်ငန်းရှင်ရိုင်ယန် Salazar များ၏အစီအမံ, အသံလွှင့်ဘိသည်အခြားဆိုင်များတွင်ဘေးဖယ်ချပစ်နှင့်ပါတီအားအတွက်ဖွဲ့စည်းသစ်ကိုစျေးကွက်နှင့်နည်းပညာလက်ခံသော niche ဖမ်းယူ။ Broadcast Beat မဂ္ဂဇင်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းများကိုလူတိုင်းသိစေရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ Salazar လမ်းဦးစားပေးသွားမည်။ ရာနဲ့ချီတဲ့ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကုမ္ပဏီများဆိုပါစို့။ သူတို့ကစက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းတွေဝေမျှဖို့တစ်နေရာတည်းသို့ရောက်သွားသည်။ ထို့အပြင် Broadcast Beat တွင် ၀ န်ထမ်းစာရေးဆရာများမှနေ့စဉ်အကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်ရေးသားနေပါသည်။ ဤစာရေးဆရာများသည်စက်မှုလုပ်ငန်းရှိပုံနှိပ်နှင့် e-ထုတ်ဝေမှုအားလုံးနီးပါးအတွက်ရေးသားခဲ့ကြသည်။ ”
ပါဝင်မှုဖန်တီးခြင်း၊ အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပါဝင်မှုပေးပို့ခြင်း - အားလုံးဖုံးလွှမ်းထားပါသည်။ အကြောင်းအရာသည်မီဒီယာကုန်သွယ်ရေးတွင်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ အရင်းအမြစ်တစ်ခုတည်းကိုသိခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သူတို့ကသိခြင်းသည်စစ်ပွဲ၏ထက်ဝက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုထက်ဝက်ကိုသင်ဖုံးအုပ်ထားပြီးအချို့။
Broadcast Beat သည်ထုတ်လွင့်ခြင်းထုတ်လုပ်မှုသတင်းများကိုပုံနှိပ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းအဖြစ်ထုတ်လွှင့်သောထုတ်ဝေမှုဟောင်းများကိုအစားထိုးထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းများထွက်ရန်သာမကကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပေးပို့ခြင်းခံရသည်။ Broadcast Beat သည်ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိစက်မှုလုပ်ငန်းပြပွဲတိုင်းနှင့်ပြmostနာအများစုတွင်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုကိုပြသသည့်ကြမ်းပြင်မှတိုက်ရိုက်ဖော်ပြပေးသည်။
“ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကုမ္ပဏီများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအပါအ ၀ င် National Broadcasters Association (NAB)၊ Motion of Picture & Television Engineers ကဲ့သို့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။SMPTE), ရုပ်မြင်သံကြားအနုပညာနှင့်သိပ္ပံအကယ်ဒမီ (NATAS) နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်” ဟုဆလာဇာကဖော်ပြသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းသည်အသံလိုအပ်သည် - Broadcast Beat သည်၎င်းကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက်ထိုနေရာတွင်ရှိသည်။ သင်သို့မဟုတ်ယခုအတိတ်တွင်မှီခိုနေရသည့်ရင်းမြစ်များမှသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အကြောင်းအရာအားလုံးအပြင်စာဖတ်သူများသည်နည်းပညာမှသည်ထူးခြားချက်နှင့်နေရာအနှံ့အကြားရှိပစ္စည်းများ၏အလွန်များပြားစွာတွေ့ရခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ Broadcast Beat သည်နည်းပညာအသစ်ကိုတီထွင်။ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အပြင်လူများကိုပါစိတ်ဝင်စားသောရှုထောင့်မှတင်ပြသည်။
မီဒီယာတွေမှာအလုပ်အကိုင်ပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေသလား။ Broadcast Beat တွင် Hot Jobs ၏စာရင်းများရှိသည်။ သင့်အားသင်၏မျက်စိကိုဖမ်းစားနိုင်ရုံသာမကသင့်ကို“ movers-and-shaker” ကဏ္inတွင်ပါ ၀ င်စေပြီးသင်၏ ၀ င်ငွေကိုမြှင့်တင်လိမ့်မည်။ သင်နှင့်ကိုက်ညီရုံသာမကသင်၏အလုပ်သစ်အတွက်သင့်တော်သောကိုက်ညီမှုရှိသောအကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုရှာဖွေပါ။ သင်၏အသိပညာဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံအခြေခံတိုးမြှင့်ခြင်းသာမကသင်၏ဘဏ္baseာရေးအခြေခံများကိုပါတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ပြောင်းလဲမှုအတွက် ACT NOW က ACT လုပ်ပါ။
“ Cloud” ဟူသောစကားစုသည်ပေါ်ပေါက်လာပြီးအလျင်အမြန်အလွန့်အလွန်အကံျွသုံးနေပုံရသည့်အချိန်တွင်မီဒီယာအကြောင်းအရာနှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်ကွန်ပျူတာများကို ၀ ယ်လိုအားဖြည့်ဆည်းခြင်းသည်ခေတ်မီစားသုံးသူများအား၎င်းတို့တစ်လျှောက်လုံးအလိုရှိသည့်အရာများကိုပေးအပ်ရန် Cloud ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဘယ်အချိန်နှင့်ဘယ်နေရာမှာသူတို့ကကြည့်ရှုရန်အဘို့အဆင်ပြေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Cloud နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းကြီး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ Broadcast Beat သည်မည်သည့်နေရာတွင်ပျံ့နှံ့နိုင်သည်ကိုသတိပြုမိရန်ဖြစ်သည်။
ဖုံးလွှမ်းရန်အလွန်များစွာသောareasရိယာအများအပြား - ဒါပေမယ့်သင်အဲဒီမှာရောက်နေရန် Broadcast Beat ရှိလိမ့်မည်! နေ့စဉ်ပုံပြင်များသည်သင့်ကိုအစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနေသောမီဒီယာလုပ်ငန်း၏အသေးဆုံးအတက်အကျမှသည်အဓိကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအထိသင့်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံရန်ကူညီလိမ့်မည်။ စာနယ်ဇင်းသမားများသည်သင့်အားမီဒီယာစျေးကွက်တွင်ရှိသင့်သကဲ့သို့ကောင်းစွာအသိပေးမှုရှိစေရန်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြင့်! လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ အခုအချိန်မှာသင့်ရဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ရှိထားရှိပြီးဘလော့ဂ်ကိုဆက်လက်ထားရှိပါ။